Badbaadi Xagaagan - Caymiska Caafimaadka Deegaanka ee Gobolka Washington - CHPW
Bogga ugu weyn > Badbaadi xagaaga
Xagaagu waa xilli qurxoon gobolkeena. Raadi ilo si aad ugu raaxaysato si badbaado leh.
La dhejiyay 1-dii Maarso, 2021 in Tilmaamaha Guriga	by deeq galley
Haddii aad ku cusub tahay Washington ama aad halkan ku noolayd noloshaada oo dhan, xagaaga ayaa isbedelaya. Boggan, waxaad ka heli kartaa ilo aad ku badbaadi karto kuleylka, intaad dabbaalaneyso, ama inta lagu jiro masiibooyinka dabiiciga sida dabka duurka.
Haddii aad u baahan tahay caawimaad buuxinta baahiyaha aasaasiga ah ee nabadgelyada xagaaga, sida cuntada, biyaha, ama qaboojiyaha, soo wac annaga Barnaamijyada Bulshada kooxda. Waxay kugu xiri karaan ilaha deegaankaaga.
Qorraxda iyo badbaadada kuleylka
Ogow calaamadaha istaroogga kuleylka iyo daalka kuleylka
Tilmaamaha Waaxda Caafimaadka ee Washington ee ku saabsan badbaadada kuleylka
Waa maxay qaddarka saxda ah ee shaashadda qorraxda?
Maxaa biyo loo cabayaa?
Badbaadada biyaha iyo dabaasha
Tilmaamaha dabbaasha ee aaminka ah ee Washington
Amaahda jaakadda badbaadada ee bilaashka ah ee Washington
Sidee amaan loogu ahaadaa marka hawadu qiiqayso
Tilmaanta EPA ee maaskarada saxda ah ee la xidho inta lagu jiro xilliga dabka
Qiiq la soco Blog-ka Xogta Qiiqa Washington, ama burburin gobol-degmo-degmo, booqo Waaxda Ecology ee Gobolka Washington.
Ka daawo fiidiyaha hoose si aad u aragto sida loo sameeyo Sifeeyaha hawada ee DIY:
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: Ogast 16, 2021